Mesut Ozil Oo La Hadlay Jamaahiirta Arsenal Kaddib Shuruuddii Unai Emery Ku Xidhay Mustaqbalkiisa - Cadalool.com
Mesut Ozil Oo La Hadlay Jamaahiirta Arsenal Kaddib Shuruuddii Unai Emery Ku Xidhay Mustaqbalkiisa
February 21, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Kubad-sameeyaha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mestu Ozil ayaa baraha bulshada u isticmaalay inuu la hadlo taageereyaasha kooxdaas kaddib markii uu tababare Unai Emery shuruud ku xidhay inuu ka mid noqdo safkiisa.
Arsenal ayaa waxay caawa la ciyaaraysaa naadiga BATE Borisov oo lugtii hore ee ka qabsoontay waddanka Belarus kusoo adkaatay 1-0, waxaanay Gunners ku qasban tahay in ugu yaraan ay goolkaas xilli horeba iska soo badaan si ay ugu soo gudbi karaan wareegga 16ka ee tartanka EUROPA LEAGUE.
Ciyaartaas hore, Mesut Ozil laguma darin liiska ciyaartoyga Arsenal ee guul-darrada lasoo laabtay, lamana hubo in kulanka caawa uu ciyaari doono iyo inuu kaydka ku caajisi doono sidii horeba looga bartay.
Tababare Emery oo shalay wax laga weydiiyey xaaladda Ozil ayaa waxa uu tilmaamay in mustaqbalkiisu uu gacantiisa ku jiro oo hadba sida uu u shaqeeyo uu isaguna fursad u siin doono.
Haddaba waxa hadalka tababaraha kaddib farriin soo diray Mesut Ozil, waxaanu la halday jamaahiirta ka hor ciyaarta caawa.
Barta uu ku leeyahay Instagram ayaa waxa uu Ozil soo dhigay sawirka ciyaartoyga Arsenal oo qaadanaya tababarka ay iskugu diyaarinayeen ciyaarta caawa, waxaanu u hoos qoray: “Waxaanu nahay Arsenal”